Elikhulu Ifomethi Iphrinta, Embroidery Machine, Cutting Plotter - YINGHE
Iphrinta enkulu yedijithali
Laser Engrver Futhi umsiki
Sublimation Heat Cindezela Umshini
Album Ukwenza Machine
Ihhovisi & Ukupakisha Machine
Umlando we-YINGHE nemodi yebhizinisi: I-YINGHE ELECTRONIC INSTRUMENTS CO., LTD ukuphela kwesitolo esikhulu semishini yasekhaya esinenkampani yesikhulumi sendawo yokugcina impahla yaphesheya kwezilwandle. inkampani yethu yasungulwa ngonyaka we-2002, ngemuva kweminyaka yentuthuko, i-YINGHE isibe yimishini yobuchwepheshe obaziwa kakhulu yasekhaya nakwamanye amazwe yebhizinisi lesimanje, isilinganiso senkampani, imikhiqizo nezinsizakalo ezweni alilandeli nakancane. Imikhiqizo yethu ithengiswa kahle emazweni angaphezu kuka-200 kanye nasezifundeni zomhlaba.
Ungaligcina kanjani ikhanda lephrinta ngokunengqondo?
Njengengxenye eyinhloko yomshini wokuphrinta we-inkjet, ukuzinza kwekhanda lokuphrinta kunquma ngokungaqondile ikhwalithi yomshini. Lapho izindleko ezingaguquki zekhanda lokuphrinta liphezulu kakhulu, ungayandisa kanjani impilo yesevisi yekhanda lokuphrinta, unciphise izindleko zokufaka esikhundleni nezinga lokugqoka, futhi ugcine ikhanda lokuphrinta kahle.
Uyini umehluko phakathi kwesisekelo samanzi ...
Uyinki osuselwa ku-oyela ukuhlanza i-pigment emafutheni, njengamafutha amaminerali, uwoyela wemifino, njll. Uyinki unamathela ophakathi ngokungena kukawoyela nokuhwamuka endaweni yokuphrinta; uyinki wamanzi usebenzisa amanzi njengendawo yokuhlakazeka, futhi uyinki usezingeni lokuphrinta Umbala unamathele ku ...
Izinzuzo ezine piezoelectric inkjet p ...
Njengoba sonke sazi, ubuchwepheshe obushisayo be-inkjet technology buye babusa imakethe enkulu yephrinta ye-inkjet iminyaka eminingi. Eqinisweni, ubuchwepheshe be-piezoelectric inkjet bubeke inguquko kubuchwepheshe be-inkjet. Isetshenziswe kumaphrinta wedeskithophu isikhathi eside. Ngokuthuthuka nokuvuthwa kwe ...